Madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiir cusub.
17 November, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Madaxweynaha Jamhuuriyada faderaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirka cusub ee dowlada Mareykanka u soo magacaawday Soomaaliya Mudane Donald Yukio Yamamoto.
Danjiri Yamamoto ayaa madaxweynaha Farmaajo uga mahadceliyey ka gudoomida warqadaha aqoonsiga safiirnimo,asagan oo carabka ku adkeeyey in dowlada Mareykanku ay Soomaaliya ka taageeri doonto dhinacyada amniga, hormarka, dhaqaalaha iyo arimaha bulshada.
Farmaajo ayaa dhankiisa umahadceliyey safiirka cusub asaga oo ku soo dhaweeyey Soomaaliya,una ballan qaaday wada shaqeyn uu ka helo dowlada iyo shacabka soomaaliyeed.
Danjire Yamamoto ayaa ku biiraya safiiro kala matala wadamo badan oo caalamkaa kuna sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo u hanjabay Banaanbaxayeyaashii Shalay
Ugu dambeyntii Madaxweyne Al-Bashiir oo is-casilay
Madaxweyne Dani oo wali kulamo ka wadda Boosaaso
Madaxweyne Farmaajo oo loogu baaqay in uu is casilo
Akhriso:-Yaa Madaxweyne Farmaajo ku matalaya Shir Madaxeedka Carbeed?
the background of the new autonomy president Visits: 667300
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 42587
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38243
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 33346
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28162
Shir Muqdisho uga socda Guddiyadda Dastuurka Visits: 40
Yariisow oo Eryay 13-Qof oo isugu jira agaasime Waaxeedyo & shaqaalo+(Ogow Sababta) Visits: 63
Wariye Coldoon oo Maxkamad lasoo taagay Visits: 24
Sidee isbitaal ku yaala Muqdisho loogu xaday Canug lagu dhashay Visits: 44
Taabid Cabdi oo lacag badan ku bixinaya baraha bulshada si uu cadaadis saaro Farmaajo Visits: 51